Cash Advance Apps like Dave: Full Review in 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Barnaamijyada Horumarinta Lacagta sida Dave: Dib -u -eegid Buuxda ee 2022
Barnaamijyada Horumarinta Lacagta sida Dave: Dib -u -eegid Buuxda ee 2022
La'aanta dhaqaale ku filan ayaa ka dhigi kara kiisaska aan muhiimka ahayn kuwo aad u weyn, gaar ahaan markaad ku sugayso jeeg.
A dhawaan sahan waxay ogaadeen in 32% shaqaalaha ay raacaan miisaaniyad halka 56% ay kaydiyaan wax ka yar $ 100 bishii. Ku dhow kala bar dadka Maraykanka ah $ 0 ku hayso koontadooda kaydka sidaas darteedna masiibadu aad bay ugu dhufatay.
Si kastaba ha noqotee, adoo adeegsanaya barnaamijyada hormarinta lacagta sida Dave, waxaad si joogto ah ugu abuuri kartaa dakhli badan naftaada. Waxaad ka heli kartaa tiro aad u badan, waxaanan dib ugu eegi doonaa maqaalkan wax yar ka dib.
PayActiv waxay dhisaysaa ganacsi tikniyoolajiyadeed maaliyadeed oo u baahan tiknolojiyad weyn iyo naqshad la yaab leh. Waxay u baahan tahay hab ganacsi oo kharash-ku-ool ah oo haddana mas'uul ka ah bulshada iyo ballan-qaad adag si kor loogu qaado hab-nololeedka dadka isticmaala.
Madalkani wuxuu diiradda saarayaa oo keliya natiijooyinka muhiimka ah ee uu doonayo inuu gaaro laakiin wuxuu kaloo diiradda saaraa hannaanka uu doonayo inuu qaato. Waxay tusaale u yihiin Shirkadda Faa'iidada Dadweynaha iyo Shahaadada B-Corp markay rabaan inay macaash helaan iyagoo u adeegaya ujeedo qiimo leh.
Bixinta, kaydinta, miisaaniyadda, iyo bixinta biilasha hadda caqabad ma aha. Markaad tixgeliso barnaamijyada horay u qaadista lacagta sida dave, PayActiv runtii waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu sarreeya.
FlexWage waa mid ka mid ah barnaamijyada hore u qaadista kaashka sida dave oo diiradda saaraya kaliya hubinta in shaqaaluhu leeyihiin maalmo xun oo u dhexeeya iyaga.
Xalalka fayoobaanta maaliyadeed waxay adeegsadaan tikniyoolajiyad horumarsan si ay shaqaalaha u siiyaan caawimada ay runtii rabaan. Helitaanka hore ee mushaharka soo gala, shaqaaluhu waxay heli karaan mushaharkooda markay u baahdaan si looga fogaado amaahda muddada gaaban ee qaaliga ah.
Qaab-dhismeedka shaqsiyeed ee ka-qaybgalka ah wuxuu ka caawiyaa adeegsadeyaashiisa inay la shaqeeyaan miisaaniyad degdeg ah, inay la qabsadaan sida wax loo barto, isku xiro dhammaan akoonnada, iyo helitaanka tababaraha maaliyadeed ee su'aalaha, taageerada, iyo qorshaynta.
Shaqaale badan ayaa la kulma dhibaato dhaqaale, iyo shaqaale cidhiidhi ah oo mashquulsan ayaa kaliya dib u jiidi doona shirkad. Xitaa barnaamijka lacag-bixinta ee dalabka ah wuxuu u adeegaa inuu ka caawiyo loo-shaqeeyayaasha inay ka caawiyaan shaqaalahooda inay dhisaan niyadsamida, iyo inay wada gaaraan ladnaanta maaliyadeed ee muddada-dheer.
XIDHIIDHKA: Socodka Socdaalka ee Kooban Einstein | Dib -u -eegista Buugga 2022
Xitaa waxay bixisaa mushaar-dalbasho, kaas oo lagu beegsanayo meelaha ugu xanuunka badan ee ururada saamaynta ku leh: wax-soo-saarka shaqaalaha, astaanta loo-shaqeeyaha, haynta, iyo maqnaanshaha. Waa mid ka mid ah barnaamijyadan lacagta kaashka ah sida dave oo bixiya xulashooyin badan.
Xitaa qaabka xubinnimada wuxuu hubiyaa in shaqaalaha ay bixiyaan wax ka yar kuwa kale ee bixiya. Waxaa sii dheer, ganacsigu wuxuu leeyahay dhiirigelin si uu uga caawiyo shaqaalahaaga inay gaaraan natiijooyin maaliyadeed oo xoog leh - waxayna marin u heli karaan aaladda ay u baahan yihiin madasha.
Laanku wuxuu bixiyaa adeegyo maaliyadeed oo guur -guura suuqyada soo -baxaya si loo kiciyo kartida aadanaha. Waa mid ka mid ah barnaamijyada horay u qaadista lacagta caddaanka ah sida dave oo kaa caawineysa inaad si fudud u hesho maaliyadda.
Iyada oo leh Laanta, wax walba waa 100% taleefanka casriga ah. Waxaan ka gudubnaa caqabadaha ay soo rogeen hay'adaha dhaqanka waxaanan siinnaa macmiil badan meelo badan oo ay ku heli karaan lacag iyo xorriyadda isticmaalka mar kasta iyo meel kasta oo ay doortaan.
Laanku wuxuu qiimeeyaa sumcadda dadka isagoo ku salaynaya xogta casriga ah. Uma baahnid wax waraaqo ah ama cajalad gaduud ah, hanaanka oggolaanshuhuna waa degdeg. Tani waxay dadka siinaysaa fursad ay ku dhistaan ​​dhibco iyadoon loo eegin taariikhdooda bangiga.
DailyPay waa bixiyaha ugu horreeya ee xalalka mushaharka ee dalabka ah kaas oo si weyn u yareeya qiimayaasha wareejinta iyada oo aan wax kharash ah u lahayn loo-shaqeeyaha. Kani waa mid ka mid ah barnaamijyadan lacagta kaashka ah sida dave oo u shaqeeya meheradaha leh ilaa 500 oo shaqaale ah.
Shirkaddan ayaa la dhihi karaa waxay hormuud u tahay warshadaha u hoggaansanaanta, isku halaynta iyo adeegga. Waxay si aan kala go 'lahayn ula midowdaa mushaharka iyo nidaamka maareynta waqtiga, mana u baahnid inaad beddesho nidaamkaaga mushaharka ee hadda jira.
Iyada oo la xoojinayo falanqaynta xogta iyo AI, waxay had iyo jeer bixiyaan heer sare si loo abuuro aragtiyo wargeliya HR iyo Mushaharka si ay kuugu sii hayaan dhaqaalahaaga.
MoneyLion waa shirkad Fintech oo gaar loo leeyahay oo macaamiisheeda siisa amaah, la -talin dhaqaale, iyo adeegyo maalgashi. Suuqa bartilmaameedka ee shirkadani waa 70% macaamiisha Mareykanka, koox haysata wax ka yar $ 2,000 oo kayd ah celcelis ahaan.
XIDHIIDHKA: Dib u eegista kaadhka Apple 2021, Miyay u qalantaa lacagtaada?
Shirkaddu waxay lacag ku samaysaa meheraddeeda amaahda, waxay u horseedaa jiil dadka isticmaala boggeeda, iyo adeegga rukunka billaha ah. Waxaad dooran kartaa inaad u isticmaasho madal lacag la'aan ama aad ku iibsato adeegyadeeda macaamilka ee qaaliga ah adoo adeegsanaya xubinnimada qaaliga ah iyo codsiyada amaahda.
Tapcheck waxaa ka buuxa xirfadlayaal khibrad leh oo haya nidaam aaminaad oo xoojinaya shaqsiyaadka ayaa ah hab wax ku ool u ah shirkadaha si ay u abuuraan khad hoose oo xoog leh oo ay u sameeyaan isbeddel ka gudbaya goobta shaqada.
Adigoo si joogto ah u yareynaya culeyska maaliyadeed ee shaqaalaha, faa'idada mushaharka ee dalabka ah waxay ka caawisaa xubnaha kooxda inay diiradda saaraan oo ay si fiican u qabtaan shaqada.
Maaddaama ay yihiin khubaro tiknoolajiyadda maaliyadeed iyo kheyraadka aadanaha, waxay ka caawiyaan shirkadaha dalka oo dhan inay oggolaadaan fayoobaanta maaliyadeed iyo inay hagaajiyaan waxqabadka ganacsiga iyagoo ka caawinaya shaqaalaha inay helaan dabacsanaanta maaliyadeed ee helitaanka mushaharka la kasbaday.
8. Lacagaha SoLo
SoLo waa bulsho ka caawisa xubnaheeda inay si fudud u helaan oo u siiyaan lacago waqti-gaaban baahiyaha degdegga ah. Intaa waxaa sii dheer, beeshu waxay iskaashi la sameysaa sidii loo dhisi lahaa natiijooyin labada dhinacba faa'ido u leh oo xubnuhu labadooduba ku hagaajin karaan caafimaadkooda maaliyadeed.
Si aad uga bilowdo madalkan, waxaad baari kartaa oo heli kartaa amaah aad ku maalgeliso oo buuxisa shuruudo gaar ah oo aad dejisay. Waxaad heli kartaa talooyin qaddarin leh markaad ka caawiso dadka kale inay caawimaad helaan inta ay ku jiraan xaalad dhaqaale xumo.
9. Maaliyadda suurtagalka ah
Maaliyadda suurtagalka ah waxay weli ka go'an tahay inay kugu xoojiso qalabka lagu hagaajinayo xaaladdaada dhaqaale. Aad bay u hufan yihiin, waxay ugu adeegaan si naxariis leh, waxay muujiyaan masuuliyad, waxayna la xisaabtamaan macaamiishooda.
Adigoo adeegsanaya madalkan, waxaad dhisi kartaa taariikhdaada deynta si aad u hesho qalab maaliyadeed oo ka wanaagsan. Waxay kaloo kaa caawiyaan inaad u soo sheegto lacagaha qaybinta xafiisyada amaahda ee waaweyn sidaa darteed waxaa lagugu abaalmariyay inaad si kalsooni leh u bixisid waqtigii loogu talagalay.
XIDHIIDHKA: Faallooyinka Caafimaadka IQ ee 2022: Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Maaliyadda suurtagalka ahi waxay kuu sahlaysaa inaad la dagaallanto khidmadaha qaaliga ah, ka hortagto lacag-dhaafka, oo si otomaatig ah u soo ceshato lacagtii aad soo martay. Waa mid ka mid ah barnaamijyada horay loo sii wado lacag caddaan ah sida dave oo si aad ah loogu kalsoon yahay.
Zirtue waa codsi amaah-bixin ku saleysan xiriir oo fududeynaya amaahda u dhexeysa saaxiibbada, qoyska, iyo xiriirada la aamminsan yahay oo leh lacag-bixinnada amaahda ACH ee otomaatiga ah. Asal ahaan, waxaad dejisay shuruudo iyo shuruudo amaahda iyo amaahda.
Zirtue wuxuu raacayaa qaab shaqo oo runtii fudud. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad dejiso qaddarka amaahda, shuruudaha bixinta, oo aad doorato xubin qoyska ah. Ka dib markaad gudbiso oo aad ku heshiiso shuruudaha, waxaad heli doontaa lacagtaada oo waxaad bilaabi doontaa raadinta lacag bixintaada.
Zirtue waxay fahamsan tahay muhiimada amniga, sidaa darteed waxay sameeyeen shaqadooda ugu wanaagsan si ay u siiyaan nabadgelyo heer sare ah nidaamkooda. Haddii aad wax arrimo ah qabtid, waxaa jira koox ammaan oo diyaar u ah inay ku soo xaadiraan.
Shaqaaluhu mar dambe uma baahna inay si adag u sugaan maalinta mushahar bixinta marka ay haystaan ​​dhibaatooyin maaliyadeed oo qarqi kara. Intaa waxaa sii dheer, uma baahna inay xareystaan ​​amaahda la imaan doonta danaha waaweyn ee aysan qaadi karin.
Ururadan ku taxan maqaalkan oo dhan waxay siin doonaan loo shaqeeyayaasha qiimaha ugu fiican iyo dalabyada kuwaas oo ka caawin doona inay shaqaalahooda ka ilaaliyaan gaajada maaliyadeed.
10 Talooyin Oo Lagu Dhisayo Nidaam Lacag-Sameyn Ah Oo Toos Ah 2022-ka
Korontadu waa mid ka mid ah hal-abuurka ugu yaabka badan, ee nolosha wax ka beddelaya ee uu bani’aadamku sameeyo, in la noolaado koronto la’aantuna ay tahay wax aan suurtagal ahayn. Arcadia…
Dariiqa Fudud ee Dib u Eegista Hantida | 2022
Ujeedada dariiqa fudud ee maalka waa madax-bannaanida maaliyadeed iyada oo la abuurayo lacag-kaaga iyada oo la adeegsanayo wax ka yar…
Yaa aan jecleyn in ay helaan gunno marka ay wax ka iibsanayaan cuntooyinkooda caadiga ah?! Gunnooyinka bixin kara...
Dib u eegista App -ka Malabka 2022: Kordhinta onlaynka ah | Sharci ama Fadeexad | Adeegyada
Inta badan dukaameystayaasha khadka tooska ah waxay qadariyaan fursad kasta oo ay ku badbaadiyaan xoogaa lacag ah marka ay wax iibsanayaan, qaarkoodna kaliya ma...
Faallooyinka Gohenry 2022: Sharci ama Fadeexad, Sida ay U Shaqeyso